YouTube थम्बनेल जेनेरेटर
के यो यूट्यूब भिडियोको लागि थम्बनेल उत्पन्न गर्न सम्भव छ? हो! साइडबारमा लिंकहरू सहित थम्बनेलहरू प्रदर्शन गर्नका लागि उपयोगी छ, वा यूट्यूब इम्बेड कोडलाई तपाईंको RSS फिड वा ईमेल भित्र भिडियोको साथ बदल्न। यो पहिले नै केहि ईमेल प्लेटफर्महरूको सुविधा हो, जस्तै WordPress न्यूजलेटर प्लगइन। तपाईंको आफ्नै युट्युब थम्बनेल जेनेरेटर लेख्न को लागी प्रयास गर्न गाह्रो छ।
शुभ समाचार यो हो कि तपाईंले थम्बनेल उत्पन्न गर्नुपर्दैन, युट्यूब तपाईंको लागि धेरै पर्खिरहेको छ।
यहाँ एक भिडियो URL छ - भिडियो आईडी याद गर्नुहोस्?
यहाँ केहि आकार र फ्रेमहरूमा छविहरू छन्, ध्यान दिनुहोस् कि भिडियो आईडी यूआरएलमा इम्बेड गरिएको छ:
तपाइँको साइडबारमा थम्बनेलहरू इम्बेड गर्न सजिलो तरीका छवि यूआरएल म्यानुअली प्रविष्ट गर्नु भनेकोaको रूपमा अनुकूलन क्षेत्र, त्यसो भएमा अनुकूलन फिल्ड प्रदर्शन गर्न तपाईंको विषयवस्तुलाई अनुकूलित गर्नुहोस्।
टैग: यूट्यूब थम्बनेल पाउनुहोस्थम्बनेलयूट्यूब छवियूट्यूब पूर्वावलोकनयूट्यूब साइडबारयूट्यूब साइडबार विजेटयूट्यूब थम्बनेल
जुन 22, 2010 बिहान 6:26 बजे
डग, म पक्का छैन कि म तपाईं यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु। म साँच्चै यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छु। के तपाईं थम्बनेल प्राप्त गर्न आफ्नो YouTube भिडियो URL लिन सक्नुहुन्छ र यसमा /0.jpg थप्न सक्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ? के यो गतिशील छवि हो?
तपाईको उदाहरण /2.jpg सम्म जान्छ। त्यो फ्रेम2हो? ०, १ वा २ ले के बुझाउँछ? तपाईं कति माथि जान सक्नुहुन्छ?
सबै प्रश्नहरूको लागि माफ गर्नुहोस् तर यसले वास्तवमै मेरो चासो जगायो। धन्यवाद!
जुन 22, 2010 बिहान 9:28 बजे
होइन, तपाईले केवल / 0.jpg जोड्न सक्नुहुन्न - सबडोमेन र मार्ग अलि फरक छ भनेर ध्यान दिनुहोस्। होइन, छवि गतिशील छैन, यो स्थिर छ। म निश्चित छैन कि संख्या के प्रतिनिधित्व गर्दछ तर0ठूलो छवि हो, 1 र2साना छविहरू जस्तो देखिन्छ जुन फरक फ्रेमहरूबाट हो।
मई 16, 2011 मा 12: 51 एएम
यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्थे! मैले तपाईंको सुझावमा मेरो कोडलाई अनुकूलित गरें र यसले काम गर्‍यो।
जुलाई,, २०१ at 30::2011। बिहान
शानदार, मैले के खोजिरहेको थिएँ। दयालु थम्बनेलहरू मात्र 120 × 90 छन्
सेप्टेम्बर 25, 2011 मा 8: 08 AM
नमस्ते बेन! द्वारा रोकिनु भएकोमा धन्यवाद... यदि तपाईंले 0.jpg जाँच गर्नुभयो भने, साइज 480px x 360px छ।
जुलिया रिबेरो परेरा
सेप्टेम्बर 25, 2011 मा 6: 59 AM
धन्यवाद, यो महान छ।
डेलिया ई. लारेज
सेप्टेम्बर 28, 2011 बेलुका 2:35 बजे
यस्तो व्यावहारिक जानकारी! धेरै धेरै धन्यवाद!: D
सेप्टेम्बर 28, 2011 बेलुका 2:42 बजे
तपाईं शर्त Delia!
अक्टोबर 17, 2012 बिहान 4:03 बजे
यसको लागि धन्यबाद। BTW, हामी छविहरूको चौड़ाई र उचाई परिभाषित गर्न सक्दछौं?
अगस्ट 16, 2015 बेलुका 3:27 बजे
दुर्भाग्यवस, होईन। YouTube ले स्वचालित रूपमा उचाई र चौड़ाई सेट गर्दछ।
मई 5, 2016 मा 12: 58 PM
वाह, यो राम्रो छ! यसको बारेमा कहिल्यै सोचेन।